200 oo xubnood oo katirsan Congress ka oo gudbinaya dacwad ka dhan ah Trump maanta - Horn Future
Washington-Wargayska New York Times ayaa filayaa in ku dhawaad 200 oo xubnood oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee Congress ka ay gudbiyaan maanta oo Arbaca ah dacwad maxkamadeed ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegasho ah inuu ku xad-gudubay distuurka kadib markii uu ka macaashay ganacsi wada shaqayn ah oo uu la yeeshay dowladdo shisheeye.
Xildhibaanadan oo matalaya sida la rumeysan yahay kooxda ugu weyn ee xubnaha kamidka ah Congress ka ayaa waxay ku doodayaan inay maxkamadaynayaan madaxweyne kursiga ku fadhiya oo ay sheegeen inuu iska indho-tiray farqada distuurka ee ka mamnuucaysa saraakiisha federaalka in ay ka oggollaadaan hadyado iyo abaal marin dalalka shisheeye iyaka oo aanan wax ogolaansho ah ka haysan Congress ka.
Wargayska ayaa sheegay in dacwadani ay tahay tii saddexaad ee nuuceega ah oo ka dhan ah Trump oo la xidhiidha isla arrintan tan iyo markii uu la wareegay madaxtinimada Mareykanka,waana dadaal isku dubaridan oo kuwa kasoo horjeeda madaxweynaha ay ku khasbayaaan in uu daaha ka faydo xidhiidhka ganacsiga iyo iibinta hantida ganacsi ama lagu meeleeyo goobo qarsoon si looga fogaado danaha iska-hor’imanaya.
Waxa sidii hore dhacday labadii xaaladood ee hore, dacwada imika loo gudbin doonaa maxkamadda federaalka ee Washington,oo lagu eedeeyay Trump inuu u guclaynayo inuu ku helo faa’ido xun iyo qaab sharci-darro ah howlihiisa ganacsiga siyaabo kala duwan.
Waxa kamid ah hababakan inay ku jiraan urursashada lacagaha diblomaasiyiinta shisheeye si sy u deggaan hoteeladiisa iyo oggollaanshaha summaddihiisa ganacsi ee dawladaha shisheeye ee badeecadaha iyo adeegyada ay bixiyaan shirkadihiisu.
Wargeyskan ayaa waxa uu soo xigtay Senator Richard Blumenthal oo hoggaaminaya dadaallada lagu doonayo in lagu gudbiyo dacwadan oo sheegay in xubnaha Dimuqraadiga ee Golaha iyo Senate ku ay aaminsan yihiin in falalka madaxweynahu ay dhaawacayaan shaqadooda,taas oo seejinaysa inay helaan xuquuqdooda distuuriga ah si ay u go’aamiyaan in la oggollaan karo faa’iidooyinka dhaqaale ee Trump uu ka helo dowladdaha shisheeye.
Blumenthal ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha madaxweynuhu ay ka fuliyeen ganacsiyo ku dhawaad 20 dowladdood,laakiinse ay ahaayeen kuwo qarsoonaa,taas oo ka dhigaysa wax aanan suurto gal ahayn in Congress ku ay fuliyaan waajibaadka distuuriga ah ee ah go’aaminta in waxa uu heley Trump ay ka dambeeyso faa’iidooyin ama abaal marin.
« Hate crimes against Muslims increase in Canada	» Hogaamiyaha aqlabiyada Golaha Wakiilada Maraykanka oo toogasho lagu dhaawacay